EURO Rebounds na ECB Economic Outlook, US Dollar Agbanwewo Nzuzo Mgbe Mwepụta
Enweghị asịsa na EURO Rebounds na ECB Economic Outlook, US Dollar Agbanwe Nwayọọ Mgbe Hapụsịrị
Euro na-agbake n'ụzọ ziri ezi na mbido nnọkọ US mgbe ECB kwuru na ọghọm dị egwu maka echiche akụ na ụba bụ nke a na-ekwupụtaghị. Agbanyeghị, ọ ka bụ otu n'ime izu kacha njọ n'izu, tinyere dollar, yen, na Switzerland franc.
Dollar ka nọ na nrụgide mgbe data ịghasịrị enweghị ọrụ na-enweghị atụ na-atụghị anya ya. Dollar Canada na-edugazi ugbu a n'ego ego ndị ọzọ, na pọọtụ ster na-etolite mgbe isi nke Bank of Canada Tiff Maclem kwuru na ọ dịghị mkpa maka mgbakwunye ọzọ dabere na ndapụta ntọala.
ECB, dika aturu anya, hapụrụ ya "Ukwuu na-agbanwe agbanwe ego amụma stance" agbanweghi. E debere ọnụego isi ego ọzọ n'ọkwa nke 0.00%, ọnụego ọmụrụ nwa ntakịrị, yana ọnụego na nkwụnye ego - 0.25% na -0.50%, n'otu n'otu.
Ọnụego ga "Nọgide na ma ọ bụ n'okpuru ugbu a etoju ruo mgbe onu oriri amụma ji nwayọọ nwayọọ na-eru nso a larịị nso iji ma n'okpuru 2% n'ime ya amụma mmiri, na a convergence ga-anọgide na-egosipụta na isi onu oriri Ọnọdụ."
Dollar US Na-agbanwe Nwayọọ Mgbe Mwepụ nke Data Job
Dollar US dara taa ka ọchichi Joe Biden gachara. Onu ogugu dollar dara na 0.32%, na-aga n'ihu na omume nke malitere na Tuesday.
Dị ka Janet Yellen tụrụ aro, ndị ahịa na-atụkarị anya ihe enyemaka ọhụrụ site na nchịkwa dị ugbu a. Ihe ndekọ data United States gosiri na ikike ụlọ rịrị elu na 1.704 nde na Disemba site na 1.635 nde na ọnwa gara aga. N'otu oge ahụ, ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ahụ si na 1.547 nde ruo nde 1.6. N’izu gara aga, ihe karịrị ndị America 900,000 bịanyere aka na nkwupụta mbụ maka enweghị ọrụ.
Ọnụ ọgụgụ nke ngwa mbụ maka uru na-enweghị ọrụ na United States dara site na 26 puku ruo 900 puku maka izu ahụ kwụsịrị Jenụwarị 16, nke dị elu karịa atụmanya nke 860 puku mmadụ.
E bipụtakwara data banyere ọnọdụ mmepụta nke Federal Reserve Bank nke Philadelphia na Jenụwarị ruo 26.5 site na 9.1, nke dị elu karịa atụmanya nke 12.2. Constructionrụ ọrụ ụlọ na December bilitere na 1.67 nde megide amụma nke 1.56 nde. Ikike ụlọ rịrị elu ruo nde 1.71 site na nde 1.60 a tụrụ anya ya.